ညောင်ရွက် စားလို့ရလား .................... - Hello Sayarwon
ညောင်ရွက် စားလို့ရလား ......
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 16/11/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ညောင်ရွက်၊ ညောင်ပင်စတာတွေက မြန်မာလူမျိုးတွေ နဲ့ အိန္ဒိယ လူမျိုးတွေအတွက် အထွတ်အမြတ်ထားရာ အပင်တစ်ခုပါ။ ဗုဒ္ဓဘုရား ပွင့်တော်မူခဲ့တာကြောင့် ဗောဓိညောင်ကို အလေးအမြတ်ထားကြတာပါ။
တကယ်ကတော့ ညောင်ပင်က ဘာသာတရားအရ အရေးပါသလို ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ ညောင်ရွက်လေးက ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လို အထောက်အကူပြုပေးလဲဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ အတူတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်လား။
ညောင်ပင်ကတော့ အထူးအထွေ ပြောစရာ မလိုအောင်ကို မြင်ဖူး၊ ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ညောင်ပင်ရဲ့ အရွက်ကို ညောင်ရွက်လို့ ခေါ်တာပါ။ ညောင်ပင်တွေက နှစ်ပေါင်း ရာနဲ့ချီပြီး ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ အမြင့်ပေ ၂၁ မီတာ အထိ မြင့်ပါတယ်။
အလေးအမြတ်ထားရသလို အရိပ်လည်း ရပါတယ်။ ညောင်ပင်က အရွက်တင် မဟုတ်ဘဲ လေရှူမြစ်တွေ၊ အခေါက်၊ အမြစ်၊ အသီး၊ အဖူးတွေကလည်း ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။
ညောင်ရွက် စားလို့ရလား …….
ညောင်ရွက် နုနုလေးတွေက စားလို့ ရပါတယ်။ ညောင်ရွက် နုနုလေးကို ရေနွေးဖျောပြီး အတို့အမြှုပ်အနေနဲ့ လုပ်စားလို့ ရသလို ပြုတ်ထားတဲ့ ညောင်ရွက်ကို ပါးပါးလေး လှီး ဆီချက်၊ မြေပဲထောင်း၊ ပုစွန်ခြောက်၊ ကြက်သွန်စိမ်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ သံပုရာရည်တို့နဲ့ အရသာ ရှိရှိလေး သုပ်စားလို့ ရပါတယ်။
ညောင်ရွက်သုပ်လို့ ခေါ်ကြသလို ညောင်ဖူးသုပ်လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ ထမင်းနဲ့ တွဲစားလို့ ရသလို ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ အဆာပြေလေးလည်း စားလို့ ရပါတယ်။
ညောင်ရွက်မှာ အာဟာရတွေ ပါလား ……..
ညောင်ရွက်မှာ အခုလို အာဟာရဓာတ်တွေ များစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။
toglic acid တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ညောင်ရွက် နဲ့ ကျန်းမာရေး
ညောင်ရွက် က ကျန်းမာရေးကို အခုလိုလေး အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။
ညောင်ရွက် နုနုလေးတွေကို ရေစင်အောင် ဆေးပြီး ရေသန့်သန့်လေးထဲမှာ စိမ်ပါ။ ဒီ စိမ်ထားတဲ့ရေကို သောက်ပေးတာ ဝမ်းကိုက်တာ၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောတာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပြီး အစာခြေလမ်းကြောင်းကို သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သွား နဲ့ သွားဖုံး ကျန်းမာစေနိုင်တယ်
သွားပိုးစားတာ၊ သွားဖုံးသွေးယိုတာတွေကို သက်သာစေဖို့အတွက် ညောင်ပင်ရဲ့ လေရှူမြစ်ကို အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။ ခံတွင်းနံ့ ဆိုးတာကို သက်သာစေဖို့လည်း အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။
သွားတွေကို ခိုင်စေပြီး ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တာကြောင့် သွား နဲ့ ခံတွင်း ပြဿနာတွေကို ကင်းဝေးစေမှာပါ။
ကျန်းမာနေဖို့ဆိုရင် ကိုယ်ခံအား ကောင်းဖို့က မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားက ခန္ဓာကိုယ်ကို ရောဂါပိုးတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးသလို ရောဂါပိုးတွေကို တိုက်ထုတ်ဖို့လည်း ကူညီပေးပါတယ်။
ညောင်ရွက်စားပေးတာ၊ ညောင်ခေါက်ကို ပြုတ်သောက်တာတွေက ကိုယ်ခံအားကို အထိရောက်ဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဆစ်ရောင်နာ (Arthritis) နဲ့ အဆစ်တွေမှာ ရောင်ရမ်းတာကြောင့် အဆစ်တွေ နာတာကို သက်သာစေဖို့လည်း ညောင်ရွက်ကို စားပေးလို့ ရပါတယ်။ ညောင်ရွက်က အရောင်ကျစေနိုင်သလို လေးဖက်နာ ဝေဒနာ သက်သာစေဖို့လည်း အထိရောက်ဆုံး ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဓာတ် မကျအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်
စိတ်ဓာတ်ကျတာက ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေ တစ်ရပ်ပါ။ ညောင်သီး၊ ညောင်ရွက်တို့ကို စားပေးတာက ဦးနှောက်ထဲမှာ serotonin ပမာဏကို မြင့်တက်စေပြီး စိတ်ဓာတ်ကျတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အရေပြား ပိုးဝင်တာ သက်သာစေနိုင်တယ်
တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှု အားနည်းတာကြောင့် ဒါမှမဟုတ် စိုထိုင်းဆ များတာကြောင့် အရေပြားမှာ ပိုးဝင်တာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီဝေဒနာကိုသက်သာစေဖို့လည်း ညောင်ရွက်ကို အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယား နဲ့ မှိုပိုးတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တယ်
ညောင်ရွက်ရော ညောင်ခေါက်ရောမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေကိုရော မှိုပိုးတွေကိုပါ တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင် ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ မှိုပိုး ကူးစက်ခံရတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးသလို အထိရောက်ဆုံးလည်း တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ညောင်ရွက်က အကျိုးမပြု ကိုလက်စထရောကို ကျဆင်းစေတာကြောင့် သွေးတွင်း အဆီဓာတ် များတာကို ကာကွယ်ထိန်းညှိဖို့ အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။
ညောင်ရွက် ရဲ့ နောက်ထပ် အာနိသင် တစ်ရပ်က သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးပြီး ဆီးချိုကို ထိန်းညှိပေးတာပါ။ ကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။
ညောင်ရွက်က အစာခြေစနစ်ကို သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင် ထိန်းပေးနိုင်တာကြောင့် အော့အန်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကဲ …. ညောင်ရွက်လေးက စားလို့ရရုံတင် မဟုတ်ဘဲ အခုလိုလေးလည်း ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။
Benefits Of Banyan Tree And Its Side Effects https://www.lybrate.com/topic/banyan-tree-benefits Accessed Date 16 November 2021
Health benefits of Banyan Tree https://www.healthbenefitstimes.com/banyan-tree/ Accessed Date 16 November 2021